उहाँले निर्देशन, यो आफ्नो लक्ष्य पुग्न व्यवहार मा लागू गर्नुपर्छ भन्ने तार्किक तर्क टिकट पाउन आफ्नो घर भित्र जानु पर्छ मिशन पूरा गर्न सबै छनकहरू फेला पार्न केटा कवाडी स्थल मद्दत गर्नुहोस्।
एउटा अचम्मको देख isometric आरपीजी देखिन्छ र यो डियाब्लो श्रृंखला समान महसुस भनेर। वाह!
अर्नोल्ड Schwarzenegger हलिउड मा राम्रो पुराना दिन बारेमा reminisces, उहाँले कुराहरू माथि झटका र मान्छे बताउन प्रयोग गर्दा तल प्राप्त गर्न!4ब्लक बस्टर चलचित्र मा शत्रुहरूको लहर खाली गर्न प्रयास गर्नुहोस्; Commando, Predator, कुल स्मरण र टर्मिनेटर।
अमर प्राण: गाढा धर्मयुद्घ
कार्य आरपीजी अन्तिम काल्पनिक, पहेली खोज र सजाइयो को तत्व Blends कि!
Spectromancer - सत्य र सौन्दर्य
शत्रु ऐ तल लिन वर्ण र आक्रमण लागि कार्ड को एक नयाँ डेक संग Spectromancer लाभ।
को डुसब्याग जीवन
बस एक डुसब्याग हुन Aspire छैन, यो डुसब्याग जीवन बिताउन! कलर पप, दा क्लब जाने र महिलाहरु संग स्कोर।
तपाईं सङ्कलन टी-शर्ट द्वारा प्रत्येक स्तर को अन्त गर्न यो गर्नैपर्छ। तल झर्नुहोस् र वेब आफ्नो बुद्धिमानीपूर्वक तरिका छैन। भाग्यले साथ दिओस्!
म निरपेक्ष को नाइट रूपमा प्रशिक्षण पूरा यात्रा थियो, तर पवित्र रूखको आवाज मेरो मनमा सुनिन्थ्यो। यसले मलाई Kaos विरुद्ध संघर्ष गर्ने एक एल्फ को दर्शन देखाउनुभयो। शायद म कल बेवास्ता सक्थे, तर म गरेनन्। म मुख्य tr बाँकी
जस्टिन बिबर देख्यो खेल
दुष्ट कठपुतली, आफ्नो प्रेमिका kidnapped छ जस्टिन उनको फिर्ता सुरक्षित प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
यसलाई नरक मा गाढा छ
कसले nightlight आवश्यक छ? सुन बारहरू सङ्कलन र रोशनी बाहिर जाने अघि निस्कनुहोस् प्राप्त। यो freaky मास्क torches मात्र 13 सेकेन्ड को लागि रोशनी, त्यसैले हतार रहनुहोस्! अन्धकारमा5सेकेन्ड पछि, यो खेल हो भन्दा ...
डा र रंगशालामा प्रकार स्तर संग यो sidescroller मा आक्रमणकारीहरूले आफ्नो बन्दूक आगो।
आफ्नो खेल चयन
कल्पना को थकित? त्यसपछि सेटिङ स्पेस बारी! तपाईं रोमांचक रुचि छैन? त्यसपछि गरेको एक शूटर प्ले गरौं! यो खेल परिभाषित र तपाईं जस्तै यो खेल्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्। तपाईँको खेल छनौट सबै कुरा प्लेयर को विकल्प मा आधारित छ। यो आनन्द लिनुहोस्
पराल टोपी सामुराई
आफ्नो उद्देश्य सामुराई तरबार स्ल्यास आकर्षित - यो योद्धा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा छिटो उत्प्रेरित गर्छ! राज्यको वा केही बचत, तर impeccable शैली यो के, बच्चा!
सबै शत्रु बन्द प्रत्येक स्तर लड उड। प्रत्येक स्तर सार्न खेल मा सबै कार्यहरू पूरा।
Gunbot अपग्रेड टन, स्तर-अप, ढाल र बन्दुक संग एक लात-गधा बन्दूक सुटिङ कार्य खेल हो!
घरमा दिदीले गोल्फ
यो दिदीले बारेमा एक सुन्दर खेल हो। तपाईं दिदीले खेल प्रेम गर्छु? उनको सबै गोल्फ traing पाठ्यक्रम पूरा गर्न मद्दत
मारियो समस्या छ। आगोमा तल झर्ने देखि मारियो बचत गर्नुहोस्। माथि चढ्नुहोस् र घर पुग्न शत्रुहरू तल खिच्नुहोस् आफ्नो सबै भन्दा राम्रो बाटो चयन गर्नुहोस्।
यो आरपीजी शैली दौडने आफ्नो बाइक वा एटीवी मा hop!
पुरातन शक्ति एक एकल पर्दा3वैकल्पिक अन्त संग एक आरपीजी-Metroid जस्तै खेल हो। औसत गेमप्लेको 35 मिनेट।
तपाईं सबै भारतीय र फ्रान्सेली नाश गर्न ज्यालादारी कामदारको भृतक लिइरहेका छन्। तिनीहरूलाई लडाइँ चुपचाप एक चक्कु साथ सशस्त्र। सार्न तीर कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र स्पेस बार आक्रमण गर्न।
घातक आरपीजी भाग्य: rebirth
युद्ध आरपीजी। टूर्नामेंट लड्न, स्तर र घातक दांतेदार ढाड पराजित गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
आफ्नो हतियार तिनीहरूलाई नष्ट, र गेट रही तिनीहरूलाई रोक्न पासो र प्रतिरक्षाको सेट अप गरेर लाश को आक्रमण पवित्र वेदी रक्षा!
सबै तारा सङ्कलन गर्न साना भालु मदत!
विशाल तबाही 2
आफ्नो हतियार शस्त्रागार संग दुष्ट clans मार्न, विस्फोटक Combos बनाउन र आफ्नो कामिकाजे बम तिनीहरूलाई समाप्त! , अंक सङ्कलन उपलब्धिहरु खोल्न र विनाश सिर्जना! विकल्पहरू चयन गर्न माउस। सार्न, जम्प र लक्ष्य कुञ्जीहरू तीर। आफ्नो weapo सुरु गर्न स्पेसबारमा
प्रत्येक स्तर को अन्त मा प्रस्तुत छुटकारा ध्यान रूपमा आफ्नो ट्रक ड्राइभ। राम्रो ग्राफिक्स र भौतिकी
हैली हमला3- यस अस्तित्व खेल मा आफ्नो उद्देश्य हिउँ, जंगल, घाटी मुलुकमा र प्रयोगशाला स्तर मार्फत उन्नति गर्न सबै शत्रु एकाइहरु नष्ट गर्न छ। 30 हतियार भन्दा सुविधा। सार्न तपाईंको खेलाडी, बायाँ र दायाँ कुञ्जीहरू सार्न गर्न आन्दोलन कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। प्रेस
तपाईं सेना लागि एक कुलीन समुद्री हुन चाहन्छु? तपाईंको आक्रमण राइफल समातेर र प्रशिक्षण excercise लिन। youve पायो के हेर्न अनुमति दिन्छ!
Drow गरेको उतेजना एक शीर्ष तल कल्पना कार्य भूमिका खेल्ने खेल हो। तपाईं अँध्यारो को underworld कालो जादू अनुष्ठान मा उनको बलिदान गर्न चाहनेहरूको डार्क प्रभुको अनुयायीहरूलाई आफ्नो राजकुमारी बचत गर्न देखि भागेका जसले एल्फ हतियार मास्टर हुनुहुन्छ।
महाकाव्य युद्ध4अद्वितीय लड्न सक्ने क्षमता5अद्वितीय नायक विशेषताहरु।3फरक मोड (सामान्य, कठिन, महाकाव्य), र अतिरिक्त चुनौतीहरू लागि4अतिरिक्त चरणमा संग 12 चरणमा मार्फत युद्ध।
राजकुमारी नै Nadine कैद गरिएको छ र एक दुष्ट साजिश हातमा छ! राज्यको रक्षा गर्न केवल नाइट को रूपमा, सबै राजाहरु अभिजात वर्गका मारेका छन्, तपाईलाई, एक मात्र स्क्वायर छोडेर! तपाईं आफ्नो तरबार घुमाउन र ट्रेस कसरी गर्ने सिक्नु पर्छ
पृथ्वीको बचाउको लागि यो भविष्य लड्न परदेशी, रोबोट, र लाश विरुद्ध लडाई। वा शत्रुहरू हुन र यसलाई विनाश लागि लड्न।